Raw Dymethazine (DMZ) powder (3625-07-8) hplc = 98% | AASraw
/ Products / vamwe / Dymethazine (DMZ) upfu
Rating: SKU: 3625-07-8. Category: vamwe
MUTSVENE unobatanidzwa uye unokwanisa kugadzira kubva ku gram kusvika kuhutano hweDymethazine (DMZ) powder (3625-07-8), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Dymethazine (DMZ) powder chinhu chakanakisa chemubato wekuchengetedza mvura zero, yakawedzera vascularity, pamwe neakaonda akazara mhasuru yakawanikwa. Ichi chikamu chave kuchiratidzwa kuchipatara kuve chakafanana kana chakakura musimba kuvaka mhedzisiro kupfuura Testosterone propionate, winstrol, uye anadrol.
Molecular Kurema: 633.011
Dymethazine (DMZ) kushandiswa kwehupfu mu steroid cycle
Dimethylzine powder inozivikanwawo seDMZ powder.
Kune vashandisi vatsva:
Vhiki 1: 15mg zuva rega rega
Mavhiki 2 ku4: 30mg zuva rega rega
Kune vashandi vane ruzivo:
Vhiki 1: 30mg zuva rega rega
Mavhiki 2 ku3: 30mg zuva rega rega
Vhiki 3 ku4: 30 kusvika ku45mg zuva rega rega
Kunyange zvazvo Dimethazine inogona kuisa mararamiro akaipa akaenzaniswa nemamwe prohormones uye anabolic steroids, zvakakosha kuti uwane mishonga yakakodzera yepoteri kana PCT inotevera mushure mokushandisa iyo kudzivisa zvakafanana. Kuva ne-in-cycle rubatsiro hazvidiwi paunenge uchiendesa mabhasikoro neDhimethazine, asi zvinokurudzirwa kukurudzira detoxifing zvinokonzera.
Kuwana post post cycle therapy (PCT) kuenda kunokosha mushure mekuenda mabhasikoro neDhimethazine. Iko inofanira kukanganiswa pazuva mushure mekupedzisira kwewaini yako yekupedzisira yeprohormone uye inofanirwa kumhanyira kwemavhiki mashoma e4 kuti udzose hutachiona hwemuviri wako kumashure kusvika kune imwe nguva. Kuva nePCT nechisarudzo yeestrogen receptor modulators kana SERM's inokurudzirwa zvikuru apo iwe uchangobva kuvhara neDhimethazine.
Nzira yekutenga Dymethazine powder (CAS 3625-07-8); kutenga DMZ powder kubva kuAASRAW